I Love Omkhulu Kunabo Bonke — UHAMBO LEE - OFFICIAL SITE
Wonk 'umuntu ufuna ukuthandwa. Kungakhathaliseki ukuthi siyakuqaphela bayakuvuma lokhu noma cha, sonke lesi sifiso kuvamile ukuba uzizwe akhuleka futhi sasimthanda abanye. Abaningi bethu ukuchitha ukuphila kwethu sonke ekufuneni umuntu ukuba abasithandayo, ethemba ukuthi khona umuntu ophambana nelungelo- noma ubani- ngeke ukwanelisa lesi ukulangatha ngaphakathi.
Well uma uhlela ukuba ulahlekelwe uzicabange romance namuhla futhi ubhekene inethemba lokuthi uzoba ekugcineni abanelisa lokho kulangazelela, Ngifuna ukuba nazi ukuthi inhloso yakho iphansi kakhulu. Ngeke uthole uthando olukhulu kunalo lonke at ikhandlela ukukhanya dinner tonight. Nokho, kukhona konke enamandla, konke okwanelisa ngayo, uthando oluphelele atholakale kuwe. Kukhona uNkulunkulu othanda ngaphezu ungase uyoke ucabange. Uthando lwakhe akayena umalalephenduka futhi ungenalo ukuba woo Him noma ukusebenza ngoba.
Ingabe uNkulunkulu uyasithanda ngabantu?
Ngiyazi ngezinye izikhathi eziningi kithi bayazibuza noma cha uNkulunkulu uyasithanda ngempela. Ubonakala kude kangaka. Futhi mhlawumbe singathanda uyeke ukungakholwa uma wenza okuthile ukuze akwenze kucace kithi. Iqiniso us, Asenazo kakade. IBhayibheli lithi, "UNkulunkulu ubonisa uthando lwakhe kithi ukuthi ngesikhathi siseyizoni, UKristu wasifela.”
Futhi waphinde elikushoyo, "Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade.”
UNkulunkulu oseye wabonisa uthando lwakhe kithi ngendlela engakholeki, ngokunika iNdodana yaKhe ngathi. Ungasali isenzo sothando esikhulu kunazo zonke e-emlandweni wezwe. Ungasali umthandi umphefumulo wakho. Kunalokho ukuthola lolo thando ngokuphinde wethembele kuJesu Kristu.
Kulabo bethu asebeye bakholwa kuye, akukho lutho emhlabeni azisoze kukwazi ukusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Futhi uthando analo ngabantu bakhe mkhulu kangaka, ukuthi singakwazi akasoze enza lutho bambeke uyasithanda ningi than He kakade owenza.
Ngakho ngoSuku lwezithandani, yima isibindi fam. Awunayo ukubheka eminye. UNkulunkulu uyakuthanda ngokujulile
Dj Mas or Samson • August 19, 2013 at 8:37 am • Phendula
Violetchirwa • August 19, 2013 at 8:38 am • Phendula
Carolyn • August 19, 2013 at 8:38 am • Phendula
Kathy Washington7 • August 19, 2013 at 8:38 am • Phendula
kayla:) • August 19, 2013 at 8:38 am • Phendula